Witcher ရာသီ ၂ ရက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ အနှစ်ချုပ်များနှင့်အခြားအရာများ - စုန်းမ
Witcher ရာသီ ၂ ရက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်၊ သွန်းခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ အနှစ်ချုပ်များနှင့်အခြားအရာများ
The Witcher ရာသီ ၂
ကလေးကဖေဖေ၏ရာသီ6သည့်အခါထွက်ကြွလာ
The Darkling အရိပ်နှင့်အရိုး၏အဆုံးမှာသေသလား? Netflix ၏နောက်ဆုံးရသတင်းများအမေရိကန်ရာသီ ၃ ရက်နောက်ဆုံးထား - ရာသီ3ကို Netflix သို့မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။
စုန်းရာသီ ၂ ရက်ကိုလွှတ်ပေးမည်
Netflix သည်ထုတ်ပြန်မည့်ရက်သို့မဟုတ်လကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ စုန်းမ ရာသီ 2, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အပေါ်အချို့သော updates များကိုရှိသည် စုန်းမ ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ ။
T1 Sarandos က Q1 ၀ င်ငွေလည်ပတ်မှုဖုန်းဆက်စဉ် စုန်းမ ရာသီ2ဖြစ်ပါတယ် Q4 2021 ခုနှစ်တွင် Netflix သို့လာမယ့် ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ်ရာသီသစ်ကိုတွေ့တော့မည်ဖြစ်သည်။
စုန်းမ ရာသီ2မကြာသေးမီက 2021. ၏နွေ ဦး ရာသီအတွက်ထုတ်လုပ်မှုထုပ်သူတို့က Post- ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အတူတူရာသီတက်အကြောင်းကိုရှစ်သို့မဟုတ်ကိုးလရှိလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ငါတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် စုန်းမ အောက်တိုဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2021. အကြား Netflix အပေါ်ရာသီ2ငါကဒီတစ်ခုအဘို့အားလပ်ရက်ပတ်ပတ်လည်ဒီဇင်ဘာလ 2021 ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
အဆိုပါစုန်းရာသီ2သွန်း
Netflix ၏အပြည့်အဝသွန်းအတည်ပြုမထားပါဘူး စုန်းမ ရာသီ ၂ ကိုရသေးသော်လည်းရာသီ ၁ မှဇာတ်ကောင်အမြောက်အများပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
Henry Cavill သည် Rivia ၏ Geralt၊ Freya Allan နှင့် Ciri၊ Anya Chalotra နှင့် Yennefer တို့နှင့်အတူပြန်လာလိမ့်မည်။
Joann Batey၊ MyAnna Buring၊ Lars Mikkelson၊ Eamon Farren, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard,
Mimi Ndiweni၊ Therica Wilson Read, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte နှင့် Anna Shaffer တို့သည်သူတို့၏အခန်းကဏ္seasonကိုရာသီ ၁ မှပြန်လည်ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်ဟုပြောကြား ရုပ်ရှင်ရုံရောစပ်မှု ။
ဒုတိယရာသီသို့ ဦး ဆောင်မည့်သရုပ်ဆောင်အသစ်အချို့ - Agnes Bjorn၊ Yasen Atour, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross နှင့် Mecia Simson ။ သူတို့ကအကောင်းဆုံး Tormund Giantsbane ၌သူ၏အခန်းကဏ္ for အတွက်လူသိများ Kristofer Hivju, join ပါလိမ့်မယ် ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ, နှင့်ရာသီသစ်အတွက် Kim Bodnia စုန်းမ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စုန်းမ ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားအတွက်အပေးအယူကျနော်တို့ရာသီ2မှာအသစ် flashbacks အတွက်ရာသီသစ်အတွက်ပယ်အသတ်ခံခဲ့ကြရသောဇာတ်ကောင်ကိုမြင်ရဖို့ကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
The Witcher ရာသီ2နောက်တွဲယာဉ်
Netflix ကိုမျှဝေမထားပါ စုန်းမ ရာသီ2နောက်တွဲယာဉ်သေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာသီဥတု2မှ 2021 ခုနှစ်တွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်အချို့သောဗီဒီယိုများကိုစတင်မြင်တွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Netflix သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဝေမျှခဲ့သည် စုန်းမ ရာသီ 2!
မည်သည့် charmer ကိုပယ်ရပ်တန့်စေနိုင်သည်,
- The Witcher (@witchernetflix) အောက်တိုဘာ 5, 2020
The Witcher ရာသီ2အနှစ်ချုပ်
ငါတို့မမြင်ဖူးဘူး စုန်းမ ရာသီ2အနှစ်ချုပ်သေး။ ရာသီရာသီမကြာခင်မှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာတွေအကြောင်းသတင်းတွေကိုမြင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိမဖြန့်ချီနိုင်ဘူး။
ဤအချိန်အတောအတွင်းရာသီ ၂ တွင်လာမည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ပထမရာသီအကုန်မှာ Ciri နဲ့ Geralt တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်။ သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကပရမ်းပတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ Yennefer နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်၊
Nilfgaard သည်အဓိကစွမ်းအင်ကစားပွဲအလယ်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့နောက်ကွယ်ရှိမာဂုပညာရှိများစွာ၏ကျောထောက်နောက်ခံနှင့် / သို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုမှုလည်းရှိသည်။ ရာသီ ၂ တွင် Nilfgaardians များကိုမည်သည့်မြောက်ပိုင်းဘုရင်ကတိုက်ခိုက်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။
ရာသီသစ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇာတ်လမ်းအများစုကို Geralt, Ciri နှင့် Yennefer တို့နောက်လိုက်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ သူတို့ဟာ Ciri ကို Nilfgaard မှဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်သလဲ။ ဒါကရာသီသစ်သို့ ဦး တည်အဓိကမေးခွန်းပါပဲ။
The Witcher ရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲအရေအတွက်
ရာသီသစ်တွင်အဖြစ်အပျက်ရှစ်ခုရှိသည် စုန်းမ ပထမရာသီလိုပဲ။
ငါပထမရာသီအတွက်ရှစ်ဇာတ်လမ်းတွဲရာသီကြိုက်တယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များအချို့အနည်းငယ်ရှည်လျားခဲ့ကြပေမယ့်ဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကြိုက်တယ်အချို့သောပြပွဲ၏ရှည်လျားဖြစ်စဉ်များကြိုက်တယ် စုန်းမ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီသည် သာ၍ ကြီးသောဇာတ်လမ်းအတွင်းရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်နှင့်တူသောနေရာဖြစ်သည်။
ငါတို့သိသမျှအားလုံးပါပဲ စုန်းမ ရာသီ2ယခုအချိန်အထိ! ရာသီသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများပိုမိုသိရှိရန်နေပါ။
ပိုကောင်းတဲ့ saul ရာသီ4ဇာတ်လမ်းတွဲ6စောင့်ကြည့်အွန်လိုင်းခေါ်ပါ
ဘယ်အချိန်မှာ 17 နောက်တဖန်ထွက်လာခဲ့တာလဲ